तपाईको साता कस्तो छ ? हेर्नुहोस साप्ताहिक राशी (भाद्र ३० गते देखि आश्विन ५ गतेसम्म) – Etajakhabar
तपाईको साता कस्तो छ ? हेर्नुहोस साप्ताहिक राशी (भाद्र ३० गते देखि आश्विन ५ गतेसम्म)
शनिबार र आइतबार अनुत्पादक रहनेछन् । माता एवं आफ्नो स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्छ । भौतिक सम्पति नष्ट हुनसक्छ । विभिन्न खालका समस्या झेल्नु पर्नेछ । मानसिक तनावमा वृद्धि हुनेछ । दैनिक काम काजमा अवरोध आउनेछ । पारिवारिक खर्चमा वृद्धि हुनेछ । सोमबारबाट भने समय विस्तारै अनुकुल हुनेछ । धार्मिक यात्रा हुनसक्छ । साताको अन्त्य तिर भने केहि उपलब्धिका काम हुनेछन् । प्रयत्न गर्दा काम बन्नेछन् । व्यापार व्यवसायबाट लाभान्वित हुनुहुनेछ । प्रेमिकाबाट सहयोग मिल्नेछ । सहयोगी मित्र भेटिने छन् ।
शनिबार र आईबारको दिन सामान्य शुभ देखिन्छ । प्रयत्न गर्न सके केहि नयाँ काम हात लाग्नेछन् । आयत निर्यात व्यापार व्यवसायबाट आम्दानी बढ्नेछ । विदेश यात्राको योग देखिन्छ । दामपत्य जीवनमा सुखानुभूति हुनेछ । सोमबार देखि भने दिन संघर्षपूर्ण रहनेछन् । घर,व्यवहार एवं पारिवारिक समस्या बढ्ने छन् । खानपानका कारण स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्छ । काम प्रतिको चासो घट्नेछ । व्यापार व्यवसायमा विभिन्न खालका समस्या देखिने छन् । विरोधीको सक्रियता बढ्नेछ । इज्जत प्रतिष्ठामा आच आउन सक्छ । प्रेमिकाबाट धोका हुनसक्छ ।
बुधबार साँझ सम्म समय अनुकुल जस्तै देखिन्छ । संघर्षबाट समाधानको बाटो भेटाईनेछ । पारिवारिक सुखमा वृद्धि हुनेछ । काम गर्दा भने कसैलाई पनि सानो नदेख्नु होला पछि समस्या पर्नेछ । विदेश यात्राको योग देखिन्छ । व्यापार व्यवसायबाट आम्दानी बढ्नेछ । न्युनतम भए पनि आफन्तको सहयोग मिल्नेछ । प्रयत्न गर्दा नयाँ काम हात लाग्नेछन् । विहिबार र शुक्रबार साता कै कमसल दिन देखिन्छ । संचित धन नास हुनसक्छ । कार्य शिथिलता बढ्नेछ । अतिथि सत्कारमा धन खर्च हुनेछ । शेष दिन सामान्य देखिन्छ । पठन पाठनमा ध्यान जानेछ ।
प्रारम्भमा काम गर्दा दुविधा बढ्नेछ । समयमा निर्णय लिन नसक्दा आएको अवसर गुुुुुुुुुुम्नेछ । साझेदार व्यक्तिबाट विश्वास घात हुनसक्छ । स्वास्थ्य कमजोर बन्नेछ । सक्रियता बढाउनु पर्ने देखिन्छ । कर्म क्षेत्रमा विरोधीको बक्रदृष्टि पर्नेछ । सोमबार मध्यान्ह देखि समयमा सामान्य सुधार आउनेछ । ऋण लगानीमा जोड नदिनु होला । थोरै प्रयत्न गर्न सके नयाँ काम हात पार्न सकिनेछ । स्वतन्त्र व्यापार व्यवसायबाट आम्दानी बढ्नेछ । आध्यात्मिक एवं भौतिक सुख शान्ति थोरै मिल्नेछ । साझेदारी काममा हात नहाल्नु होला ।
यो साता उतार चढावमा वित्नेछ । सहज र सरलता कहि केहिमा देखिदैन । इज्जत प्रतिष्ठामा दाग लगाउन खोज्ने छन् । काम काजमा अवरोध आउनेछ । अनावस्यक खर्चमा वृद्धि हुनेछ । महत्वकाँक्षी योजना अगाडि नसार्नु होला । अरुको भरमा मात्रै काम नगर्नु होला । धन सम्पति चोरी वा हराउन सक्छ सतर्क रहनुहोला । बुधबार साँझबाट समय थोरै अनुकुल बन्नेछ । हेलचक्र्याई नगरि काम गर्नु होला । संघर्षबाट सफलताका सिढि चढ्न पाईनेछ । ऋण लगानी नगर्नु होला । मुद्धा मामिलामा जित हुनेछ । यान्त्रिक काममा बढि सफलता मिल्नेछ ।
शनिबार र आईतबार केहि काम हुनेछन् । पुराना समस्या समाधान गर्न सक्षम हुनुहुनेछ । अधिकाँस काम आफ्नै बाहुबलबाट सम्पादन हुनेछन् । व्यापार व्यवसायबाट आम्दानी बढ्नेछ । भाई बन्धुको सहयोग मिल्नेछ । मनमा उत्साहा बढ्नेछ । शेष दिनहरु त्यति अनुकुल देखिन्न । काम गर्दा विभिन्न समस्या झेल्नु पर्नेछ । आफन्त भनेकाले नै वेइमान गर्ने छन् । व्यापार व्यवसायमा मन्दि आउनेछ । फजुल खर्चमा वृद्धि हुनेछ । निर्णय क्षमतामा ह्रास आउनेछ । मनमा अशान्ति बढ्नेछ । लगानी डुब्न सक्छ । भ्रममा पार्न सक्छन् सतर्क रहनुहोला ।
बुधबार साँझ सम्म समय अनुकुल रहनेछ । थोरै मेहनत गर्दा धेरै सफलता मिल्नेछ । अधिकाँश काम आफ्नै बाहुबलबाट सम्पादन हुनेछन् । व्यापार व्यवसाय एवं उद्योेग धन्दाबाट सन्तोषजनक लाभ लिन सकिनेछ । शेष दिन त्यति अनुकुल देखिन्न । नोकरी तथा राजनीतिमा भूमिकाको खोजी हुनेछ तर प्राप्त गर्न गाह्रो होला । घर परिवार तथा समाजबाट वहिष्कृत हुने अवस्था आउन सक्छ सतर्क रहनुहोला । आम्दानीका मार्ग खुम्चिने छन् भने खर्चका मार्ग बढि खुल्ला हुनेछन् । विवेक हिनहरुको संगत हुनसक्छ । स्वास्थ्य कमजोर हुनेछ ।
समग्रमा साता उत्तम देखिन्छ । प्रयत्न गरेमा नयाँ काम हात लाग्नेछ । घरपरिवार,इष्टमित्र,साथीभाई तथा समाजबाट सहयोग सहानुभूति मिल्नेछ । व्यापार व्यवसायबाट आम्दानी बढ्नेछ । सामजिक काममा अभिरुची बढ्नेछ । वौद्धिक व्यक्तित्वसँगको भेटले उर्जा थपिनेछ । पुराना मित्रहरुसँग भेटघाट बढ्नेछ । अधिकाँश काम आफ्नै प्रयत्नबाट सम्पादन हुनेछन् । नयाँ सोचर विचार सहित कार्य क्षत्रमा प्रवेश होला । आर्थिक संकट टरेर जानेछन् । पढाई लेखाईमा भने कम ध्यान जानेछ । मंगलबार र बुधबार आर्थिक कारोवार नगर्नु होला ।
शनिबार र आईतबार अनुकुल देखिन्न । काममा विभिन्न समस्या आउन सक्छन् । विश्वास गरेकाले धोका दिन सक्छन् । आम्दानीको तुलनामा खर्च ज्यादा हुनेछ । स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्छ । सोमबार मध्यान्ह देखि बुधबार साँझसम्म समय अनुकुल बन्नेछ । रोकिएका कामहरु अगाडि बढ्नेछन् । प्रयत्न गर्दा धेरै ठाँउमा सफलता मिल्नेछ । व्यापार व्यवसायबाट आम्दानी बढ्नेछ । पढाईमा प्रगति हुनेछ । भोज भतेर सभा सम्मेलनमा भाग लिने अवसर मिल्नेछ । शेष दिन अशुभ देखिन्छ । आर्थिक हिनामिना हुने देखिन्छ । विश्वास घात हुनेछ ।
शनिबार र आईतबार आकस्मिक आम्दानीको योग देखिन्छ । लगनशिल भई गरेका काम सफल हुनेछन् । जीवन साथीको उचित सहयोगले उत्साहा बढ्नेछ । व्यापारबाट आम्दानी बढ्ला । सोमबार मध्यान्ह देखि वुधबार साँझ सम्म समय प्रतिकुल हुनेछ । फजुल खर्च बढ्नेछ । कार्य क्षमतामा ह्रास आउनेछ । गरेका कामले पूर्णता पाउने छैन । आसा निरासामा परिणत हुनेछन् । व्यर्थको घुमाई फिराई बढि हुनेछ । मानसिक तनाव बढ्नेछ । खानपानका कारण स्वास्थ्यमा समस्या आउनेछ । शेष दिन थोरै अनुकुल हुनेछन् । गतिरोधको अन्त्य हुनेछ । रोकिएका काम अगाडि बढ्ने छन् ।
बुधबार साँझ सम्म समय अनुकुल देखिन्छ । सरल विधिबाट कार्य सम्पादन हुनेछन् । विरोधीहरु दण्डित हुनेछन् । विवादको अन्त्य हुनेछ । वैदेशिक कार्यबाट लाभान्वित हुनुहुनेछ । प्रयत्न गरेमा नयाँ काम हात लाग्न सक्छ । व्यापार व्यवसायबाट आम्दानी बढ्नेछ । घर परिवार छरछिमेकी इष्टमित्र साथी भाईबाट सहयोग पाईनेछ । वौद्धिक व्यक्तित्वसँग भेटघाट होला । शेष दिन प्रतिकुल देखिन्छन् । बन्न लागेका काम विग्रिन सक्छन् । अनावस्यक कामबाट तनाव बढ्नेछ । व्यापार व्यवसायमा गिरावट आउनेछ । विश्वास गरेकाले धोका दिने छन् । आस्था र विश्वास घट्नेछ ।
साता उत्तम रहेकोछ । भाग्यले साथ दिदा विगतमा गर्न नसकेका काम हुनेछन् । नोकरी तथा राजनीतिमा नयाँ सम्भावनाहरु देखिने छन् । धार्मिक काममा धन खर्च हुनेछ । प्रयत्न गर्दा नयाँ काम हात पर्नेछ । सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्नु पर्नेछ । इज्जत प्रतिष्ठा बढ्नेछ । व्यवसायिक प्रतिष्ठानबाट लाभान्वित हुनुहुनेछ । वित्तिय कारोवारमा सुधार आउनेछ । स्वस्थ्य अनुकल बन्नेछ । घर परिवार आफन्तजनको सहयोग सहानुभूति मिल्नेछ । प्राविधिक काममा बढि दखल हुनेछ । शैक्षिक क्षेत्र भने कमजोर देखिन्छ । भ्रमबाट मुक्त भएर काम गर्नु होला ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, भाद्र ३१, २०७५ समय: २२:५५:३५